ငါ့သမီးလေး ဘာဖြစ်လို့တုန်း မေမေ့ကိုပြောဆိုတော့ – သုတရသ
ညဘက်တွေကောင်းကောင်းမအိပ်ရ။ လူစိမ်းတွေဝင်တာကြောင့် သံပုံးတွေတီးပြီး ဝိုင်းလိုက်ရတယ်။ မီးကွင်းပစ်တဲ့အသံတွေကြောင့်လည်း ညတိုင်းရင်တမမနဲ့။ သမီးကြီးက သိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့… မီးကွင်းပစ်တယ်ဆိုတဲ့အသံတွေ လူစိမ်းတွေဝင်လို့ လိုက်ရတာတွေ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ
စုပြီးကင်းစောင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာတွေကို မြင်နေ သိနေ နားလည်နေပြီ။ ညနေကထဲက မျက်နှာလေးပျက်နေရှာတာ ညရောက်မှာ. ကိုသူကြောက်နေရှာတယ်။ မေမေရယ် 2020ကမှကောင်းသေးတယ် ကိုဗစ်ပဲရှိတာ အိမ်ထဲကမထွက်ရင်ရတယ်။ အခု 2021က ပိုဆိုးတယ်နော် ရောဂါတွေရော လူဆိုးတွေရောတဲ့။
သူ့အသိလေးနဲ့သူပြောနေရှာတာ။ ခုနကလည်း. သမီးငယ်လေးကိုသိပ်နေရင်း သူ့ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည်တွေကျနေတာ။ ငါ့သမီးလေး ဘာဖြစ်လို့တုန်း မေမေ့ကိုပြောဆိုတော့ ကြောက်လို့တဲ့။ ဘာမှမဖြစ်ဘူးသမီး မေမေက မအိပ်ဘဲထိုင်စောင့်ပေးမှာ.. ငါ့သမီးလေးတွေစိတ်ချလက်ချအိပ်
ဘာမှမဖြစ်ဘူး မေမေ့ကိုယုံတယ်မလားဆိုပြီး သူ့ကိုဖက်ထားပြီး ခေါင်းလေးကိုပွတ်ပေးနေမှ “ဟုတ်”ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့အိပ်သွားရှာတယ်။ လူမမယ် ကလေးတွေရင်ထဲ. ကိုတောင် အကြောက်တရားတွေထည့်ပေးတဲ့ မိစ္ဆာတွေ ငါက ငါ့သမီးတွေရင်ထဲက အကြောက်တရားတွေကို အမြစ်ကဆွဲနှုတ်ပစ်မှာ။
သမီးတွေဘယ်တော့မှ အကြောက်တရားတွေနဲ့ မရှင်သန်စေရဘူး။ မတရားမှု့ကို ဘယ်လိုရဲရဲရင့်ရင့်ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ ပြပေးမှာ။ ငါ အသက်ရှင်နေသမျှ ငါ့သမီးတွေ ဆံခြည်တမျှင်တောင် မထိနိုင်အောင်ကာကွယ်မှာ။အသက်ပေးပြီးတောင် မွေးခဲ့သေးတာပဲ အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ဖို့.. ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင်မလိုဘူး။ အမ်နိုင်း
ညဘကျတှကေောငျးကောငျးမအိပျရ။ လူစိမျးတှဝေငျတာကွောငျ့ သံပုံးတှတေီးပွီး ဝိုငျးလိုကျရတယျ။ မီးကှငျးပဈတဲ့အသံတှကွေောငျ့လညျး ညတိုငျးရငျတမမနဲ့။ သမီးကွီးက သိတတျတဲ့အရှယျရောကျနပွေီဆိုတော့… မီးကှငျးပဈတယျဆိုတဲ့အသံတှေ လူစိမျးတှဝေငျလို့ လိုကျရတာတှေ ရပျကှကျထဲကလူတှေ စုပွီးကငျးစောငျ့ဖို့ပွငျဆငျနကွေတာတှကေို မွငျနေ သိနေ နားလညျနပွေီ။
ညနကေထဲက မကျြနှာလေးပကျြနရှောတာ ညရောကျမှာ. ကိုသူကွောကျနရှောတယျ။ မမေရေယျ 2020ကမှကောငျးသေးတယျ ကိုဗဈပဲရှိတာ အိမျထဲကမထှကျရငျရတယျ။ အခု 2021က ပိုဆိုးတယျနျော ရောဂါတှရေော လူဆိုးတှရေောတဲ့။ သူ့အသိလေးနဲ့သူပွောနရှောတာ။ ခုနကလညျး. သမီးငယျလေးကိုသိပျနရေငျး သူ့ဘကျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ မကျြရညျတှကေနြတော။
ငါ့သမီးလေး ဘာဖွဈလို့တုနျး မမေကေို့ပွောဆိုတော့ ကွောကျလို့တဲ့။ ဘာမှမဖွဈဘူးသမီး မမေကေ မအိပျဘဲထိုငျစောငျ့ပေးမှာ.. ငါ့သမီးလေးတှစေိတျခလြကျခအြိပျ ဘာမှမဖွဈဘူး မမေကေို့ယုံတယျမလားဆိုပွီး သူ့ကိုဖကျထားပွီး ခေါငျးလေးကိုပှတျပေးနမှေ “ဟုတျ”ဆိုပွီး မကျြရညျတှနေဲ့အိပျသှားရှာတယျ။ လူမမယျ ကလေးတှရေငျထဲ. ကိုတောငျ အကွောကျတရားတှထေညျ့ပေးတဲ့ မိစ်ဆာတှေ ငါက ငါ့သမီးတှရေငျထဲက
အကွောကျတရားတှကေို အမွဈကဆှဲနှုတျပဈမှာ။ သမီးတှဘေယျတော့မှ အကွောကျတရားတှနေဲ့ မရှငျသနျစရေဘူး။ မတရားမှု့ကို ဘယျလိုရဲရဲရငျ့ရငျ့ရငျဆိုငျရမလဲဆိုတာ ပွပေးမှာ။ ငါ အသကျရှငျနသေမြှ ငါ့သမီးတှေ ဆံခွညျတမြှငျတောငျ မထိနိုငျအောငျကာကှယျမှာ။အသကျပေးပွီးတောငျ မှေးခဲ့သေးတာပဲ အသကျပေးပွီးကာကှယျဖို့.. ဆိုတာ ပွောနစေရာတောငျမလိုဘူး။ အမျနိုငျ
C D M လှုပ်ရှားမှုထဲ ပါဝင်နေတဲ့ ပြည့်သူ့ ဝန်ထမ်းများကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ကူညီ အားပေးကြတဲ့ ပြည်သူများ